Barcelona oo ku guuleystey EUFA Super Cup ka dib guuldarada FC Porto +Sawiro – SBC
Barcelona oo ku guuleystey EUFA Super Cup ka dib guuldarada FC Porto +Sawiro
Ciyaar adag oo loogu tartamayey koobka isku haysta magaca labada koob ee ugu caansan Yurub eek ala ah Champion League & Europe League ee Super Cup ayey caawa ku guuleystey kooxda Barcelona ee reer Spain.
Laba gool oo ay dhaliyeen Lionel Messi & Cesc Febregas oo koobkiisii 2aad mudo 10 maalmood ah ku qaaday ayaa u suurgaliyey Barcelona ku guuleysiga Super Cup, laakiin qaybtii hore ee ciyaarta kooxda reer Portogal FC Porto cashar adag ayay siisey Barcelona oo waxay gaartey in kubada ay haysan waayaan ciyaaryahanada dunida ugu caansanaa, isla markaana goolhayaha Barcelona Valdes uu kubada u bixiyo banaank ku dhawaad 5 jeer ka dib markii weeraryahanada Porto ay cadaasi xoogan saareen.
Inkastoo dadaal aad u sareeya oo si weyn loogu riyaaqay ay la yimaadeen ciyaaryahanada Porto hadana waxaa niyad jab ku ridey laba gool ku laad ama rigoore oo ay dalbadeen oo garoosirihii ciyaarta dhexdhexaadinayey uu madaxa ka ruxay, kuwaasi oo ka dhashay ka dib markii kubada uu gacanta ku taabtey daafaca Barcelona Eric Abidal oo ku dhex jiray shabaqa kooxdiisa, iyadoo garsooruhu uu Porto gudoonsiiyey laad xor ah (free kick) halkii uu rigeere ama gool ku laad uu dhigi lahaa.
Sidoo kale Eric Abidal ayaa gudaha goolka Barcelona wuxuu dhulka dhigay ciyaaryahan Guarin balse garsooruhu uma dhigin wax rigoore ah Prto.
Guusha uu caawa koobka Super Cup uu ku qaaday Pep Guardiola waxay ka dhigan tahay in uu rikoor cusub dhigay kooxda Barcelona isagoo ku guuleysty 12 koob mudo afar sano ah oo uu ahaa tababaraha Barcelona.
Barcelona oo ay haatan ku soo biirey Cesc Fabregas & Alexis Sanchez waxay ka dhigan tahay in ay sii korortey tayadii ay ku qaadey Champion League -ga xili ciyaareedkii hore, isla markaana ay noqonayso kooxda aduunka ugu sareysa.
waxaan ahay taageere liverpool